डेढ महिनादेखि मनाङमा लागेको आगो निभेन, जडिबुटी र पशुपंक्षी खतरामाMain Samachar
डेढ महिनादेखि मनाङमा लागेको आगो निभेन, जडिबुटी र पशुपंक्षी खतरामा
२८ पुष २०७७, मंगलवार १४:२९ प्रकाशित
मनाङ । हिमाली जिल्ला मनाङको चामे गाउँपालिका–२ थानचोकको वनबाट मङ्सिर ११ देखि शुरु भएको आगो अझै नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन । सल्लोको जङ्गल, सुकेका पातपतिङ्गर अनि निगालोको झाडीमा फैलिएको आगलागी नियन्त्रणबाहिर नै छ । हाल यो आगलागी नासो गाउँपालिका–८ ताचैसम्म पुगेको छ ।
आगलागीबाट हालसम्म कुनै मानवीय क्षति भएको छैन । तर जडीबुटी र वन्यजन्तुमा कति असर प¥यो भन्ने लेखाजोखा छैन । आगलागी भएको क्षेत्र लमजुङको सदरमुकाम बेँसीशहरबाट ५५ किलोमिटर र सदरमुकाम चामेबाट डेढ घण्टाको दूरीमा पर्दछ । प्रशासनले आगो नियन्त्रणमा तदारुकता नदेखाउँदा हजारौँ हेक्टर जङ्गल डढेलोले सखाप बनाएको छ । यो क्षेत्र अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र (एक्याप) को संरक्षणमा रहेको छ ।
मनाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णु लामिछानेले सुरक्षा समितिसँगको समन्वयमा नियन्त्रणको प्रयास भइरहेको बताए। “हाम्रो प्रयत्न छ । हामी नियन्त्रणको प्रयास गरिरहेका छौँ । मानवले गर्न सक्नेसम्म जति हामी गर्छौं । मानव बस्तीसम्म आउन नदिने हाम्रो प्रयास हुनेछ”, उनले भने, “अन्तिम अवस्थामा हेलिकोप्टरसम्मको प्रयोग पनि हुनसक्छ ।”
अर्का स्थानीय तथा यस क्षेत्रका सिएमसीका अध्यक्ष याद घलेले हिमाली क्षेत्रको जङ्गलमा लामो समयदेखि लागेको आगोबाट महत्वपूर्ण जडीबुटी र वन्यजन्तु लोप भएको बताए । “प्रशासन र जनप्रतिनिधिले पनि सहयोग गरेनन्, छिमेकी पनि मुकदर्शक बने”,उनले भने । आगलागी भएको क्षेत्र जङ्गलमा थार, घोरल, कस्तुरी, मृग, हिउँचितुवा जस्ता वन्यजन्तु र पाँचऔँले, निरमसी, कुट्की, पदमचाल, यार्सागुम्बालगायत जडीबुटी पाउने गरिन्छ ।
आगलागी फैलँदै जाँदा नजीकैको ताचै गाउँ जोखिममा परेको छ । ताचैमा ६० घरपरिवारको बसोबास रहँदै आएको छ । डेढ महिनामा मात्र प्रशासनको उपस्थिति देखिएको छ । स्थानीयवासीले हारगुहार गर्दासमेत प्रशासनले नसुनेको बताउँछन् । सोमबार मात्र प्रजिअ, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरी र एक्यापका प्रतिनिधि आगलागी भएको क्षेत्रमा पुगेको छ । आगलागीले मानव बस्ती जोखिममा पर्ने अवस्था आएपछि मात्र प्रशासनले आफ्नो उपस्थिति देखाएको हो ।
स्रोतसाधन अभाव र भौगोलिक विकटताले आगो नियन्त्रणमा चुनौती थपिएको छ । स्थानीयवासी र सुुरक्षा निकायले स्याउलाको प्रयोग गरेर आगो नियन्त्रणको प्रयास गरिरहेका छन् । यसबाहेक सुरक्षा निकायसँग रहेको सामान्य साधनबाहेक अरू केही छैनन् । जसले आगो नियन्त्रणमा चुनौती थपेको छ ।
किन हुन्छ आगलागी
आगलागीका कारण महत्वपूर्ण जडीबुटी र वन्यजन्तु लोप हुने अवस्था आउँदा जैविक विविधतालाई समेत असर पर्ने देखिएको छ । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र (एक्याप) का जिल्ला प्रमुख लेखनाथ गौतमले आगलागीबाट जैविक विविधतामा गम्भीर असर पु¥याउने बताए । “हिमाली क्षेत्रमा लामो समयसम्म लागेको आगोले वनस्पति र वन्यजन्तु लोप हुन्छन् । यसले जैविक विविधतालाई असर पार्छ उनको भनाइ छ । हिमाली जङ्गलमा आगलागी हुनुमा जङ्गली जनावरको चोरीशिकारी, गुच्चीच्याउर नयाँ घाँसका लागि आगलागी हुने गर्छ । रासस
जनमोर्चाले प्रदेश सचिवालयमा पठायो सांसद थापालाई दलको नेताबाट हटाएको जानकारी
ग्रान्डी अस्पतालमा अक्सिजन अभाव, नयाँ बिरामी भर्ना नलिने
एमाले नेता चौलागाईंको पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि
चौबिस घण्टामा १६८ जनाको मृत्यु, ९ हजार ३०५ संक्रमित थपिए
पार्टीले एक असल र निष्ठावान् नेता चौलागाईँलाई गुमायोः प्रधानमन्त्री
सुएज नहर विस्तार गर्ने इजिप्टको योजना
चीनले अनुदान दिएको पाँच लाख डोज खोप बंगलादेशमा
विश्वभर कोभिडबाट ३३ लाख ३१ हजारको मृत्यु
भारतमा कोरोनाभाइरसको संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या २ लाख ५० हजार नाघ्यो
सांसद थापाले प्रदेश प्रमुखलाई भने– म तटस्थ छु, दलको नेताबाट हटाउनु जालसाजी
महामारीविरुद्ध यसरी लडिरहेको छ बुटवल उपमहानगर
गण्डकीमा जनमोर्चा विभाजित हुँदा मुख्यमन्त्रीमा गुरुङलाई मौका !
गण्डकीकाे आलर्म सेट दिउँसो ४ बजे : नोटिफिकेसन मुख्यमन्त्री पिएस !
ओलीले विश्वासको मत नपाए कसरी बन्छ नयाँ सरकार ? यस्तो छ संवैधानिक व्यवस्था
साढे ९ करोड भ्रष्टाचारका आरोपित ५ लाख धरौटीमा रिहा
गायक प्रेमध्वज प्रधानको निधन
ओलीले पाएनन् विश्वासको मत, प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त
महत्वपूर्ण लिंकहरु Select Category Banner अन्तराष्ट्रिय अन्तर्वार्ता अर्थतन्त्र आश्चर्य खेलकुद जीवनशैली तस्बिर बोल्छ प्रदेश प्रवास फिचर भिडियो मनोरञ्जन राजनीति रोजगार विचार विविध समाचार समाज सुचना प्रविधि स्वास्थ्य / जीवनशैली
Promoter : Sushan Ghimire